Tag Archive for "अस्पताल" - सप्तरीका अस्पतालमा औषधि अभाव
२७ पुस, काठमाडौं । सप्तरी जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावका कारण गरिव तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति तथा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानिय निकायको निर्वाचन पश्चात सरकारी संस्था स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएको र सम्बन्धित स्थानीय निकायले औषधि खरिद नगर्दा स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा औषधि अभाव भएको गुनासो आएको छ । करिब ८० प्रकारका औषधि अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीबाट वितरण गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान रहे पनि हाल सिटामोल समेत नरहेको बुझिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
३ मंसिर, काठमाडौँ । प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पुत्र प्रकाश दाहालको आज विहान निधन भएको हो । आज बिहान ५ बजेर ३८ मिनेट जाँदा उनलाई हृदयघात भएपछि उनलाई बिहान ६ बजे नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रकाश दाहाललाई पौने ६ बजे अस्पताल ल्याइपुर्याए पनि प्रारम्भिक रिपोर्टमा १ बजे नै पहिलो स्ट्रोक भएको देखिएको छ । यता, आमा सीता दाहालको पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डाक्टरको एक टोली लाजिम्पाट पुगेको छ । अस्पतालमा माओवादी नेताहरु आउने क्रम जारी रहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
डा भट्टराई अस्पतालबाट डिस्चार्ज
२६ साउन, काठमाडौं । मूत्रथैलीको शल्यक्रिया गरी विगत छ दिनदेखि अस्पताल भर्ना भएका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई हिजो घर फर्किएका छन् । डा भट्टराईको भक्तपुरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा गत शुक्रबार मूत्रथैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनको उपचारमा रु ८५ हजार खर्च भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । आज अस्पतालबाट घर फर्किनेक्रममा डा भट्टराईले स्वदेशमै पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने भन्दै उपचारका नाममा विदेश धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।	थप पढ्नुहोस्
गर्मीका कारण एकजनाको मृत्यु
१३ असार, काठमाडौं । धेरै दिनदेखि पानी नपर्दा हिजो साँझ महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी गाउँपालिकामा अत्यधिक गर्मीका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ । नाम, थर, वतन नखुलेका अन्दाजी ५० वर्षीय एक पुरुषको मटिहानी गाउँपालिका–५ स्थित बजारमा अत्यधिक गर्मीका कारण मृत्यु भएको प्रहरी चौकी मटिहानीका प्रहरी नायब निरीक्षक महेन्द्र साहले बताए । आँखा स्पष्ट नदेख्ने ती पुरुष केही दिन पहिले मटिहानी बजारमा देखा परेको र बजारमै माँगी खाने तथा खुल्ला आकाशमुनि नै रातदिन बिताउँदै आएकोमा उनको हिजो साँझ गर्मीका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
नेशनल मेडिकल कलेजमा ब्रेन हैम्ब्रेजको सफल अप्रेशन
२९ जेठ, वीरगंज । नेशनल मेडिकल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताल वीरगंजमा एक ६५ वर्षिय बृद्धको सफल रुपमा ब्रेन हैम्ब्रेजको अप्रेशन भएको छ । सुवर्णपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ जितपुर परसवाका ६५ वर्षिय बृद्ध पूर्णवासी चौधरीको टाउकोमा रगत जमि ब्रेन हैम्ब्रेज भएकोमा वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार्थ आउदा बरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. श्यामबाबु प्रसाद पटेलले सफल रुपमा अप्रेशन गरेका छन् । गत केहि महिना देखि भारत लगायत नेपालको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराउदा ठिक नभए पछि नेशनल मेडिकल कलेज पुगेका उनलाई डा. पटेलको टिमले सफल रुपमा अप्रेशन गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्